Vakashela uHultsfred | EHultsfred kunendawo yokuphila!
Kukhona indawo lapha yokuphila
Thola amathiphu wokuzidela nokuhlangenwe nakho
Kungsfiskaren ngesikhathi soMkhosi we-Hultsfred
Zitholele u-Hultsfred no-Vimmerby ngomhla ka-22 Meyi
Ungaphuthelwa noma yini eyenzekayo kumasipala waseHultsfred.
[tribe_events view = "usuku"]
Imyuziyamu ejabulisayo, imisebenzi enobungani bomndeni, izinto ezithakazelisayo nemvelo emnandi. Thola wonke uHultfred!
EJärnforsen, kunenethiwekhi ephelele yemizila yokuhamba intaba enhle, yonke iqala ngaphandle komphakathi. Ekuqaleni kunendawo yokosa inyama,
Ichibi lokudoba lezemidlalo elinomlingisi wechibi elibushelelezi eliqukethe i-pike enkulu nezinhlanzi ze-carp. I-Hulingen itholakala enkabeni yedolobha eduze kwedolobha lase-Hultsfred. Kulula kakhulu ukuthola ichibi uma wena
IBjörnnässlingan ihlathi lomlingo langempela elinemiphini emidala emile izungeze amadwala ambozwe ngofele. Isiqiwu seBjörnnäset sise-
IStensjön ichibi elihle nelinokuthula elisekude kakhulu ngamakhilomitha ayi-10 eningizimu-ntshonalanga yeHultsfred. Kuyingxenye ye-FVO kaStora Hammarsjön
Umshini womoya waseDalsebo
I-Dalsebo windmill ibuyiselwe kahle futhi manje iqukethe umnyuziyamu. Idolobhana laseDalsebo lisendaweni ebukeka kahle enezinkambu nezinhlelo zemigwaqo ezinokufana kwayo
Emån - Klövdala kuya eRyningsnäs
Ukwelulwa kwesibili kuka-Emån. Le ngxenye isukela eKlövdala nguJärnforsen iye eRyningsnäs. Lo mfula uzungezwe ihlathi nedlelo. Umfula uhlukahlukene
Ukuhlangenwe nakho kokuzingela nemvelo kaJernudden
Ukuhlangenwe nakho kokuzingela kanye nemvelo kukaJernudden. Ngokubambisana nezinkampani zendawo, uJernudden unikela ngamaphakeji ahlukahlukene afaka phakathi ukuzingela, okuhlangenwe nakho, indawo yokuhlala kanye nokudla. Izibonelo zamaphakeji okuzingela amagiya okuzingela nge
Mangaza ezindaweni zomlando, ubuciko nemisebenzi yezandla, izilwane zasendle, imvelo enhle nokunye okuningi. Kunemisebenzi eminingi nokuhehayo lapha, eminingi yayo evulekile unyaka wonke!
ILilla Åkebosjön itholakala enyakatho neStora Åkebosjön eStora Hammarsjön's FVO futhi amachibi axhunywe ngomfudlana. Uma uya entshonalanga kusuka
IGnötteln iyichibi lamanzi elicacile elingenamsoco. Njengoba leli chibi lisendaweni yomhlaba wezolimo, ichibi alijwayelekile esifundeni esinamanzi acwebile.
Idolobhana elingaphazanyiswa iVisböle yidolobhana elijwayelekile elivela endaweni yabalimi yekhulu le-1700. Izindlu zokuhlala zakhiwe njengezindlu ezinkulu ezinezitezi ezimbili eduze komunye nomunye egqumeni naphakathi kwazo
Fröåsa isandla iphepha isigayo
Ngokwencwadi yonyaka ye-Technical Museum ka-2014, uFröåsa uyena olondolozwe kakhulu eSweden. Ngakho-ke, le ndawo inentshisekelo kuzwelonke. IFröåsa handpappersbruk kwakuyimboni yokuqala yendawo ngo-1802.
IStubbhult yipulazi elincane, elincane elinamanani aphezulu emvelo namasiko. Endaweni ethule kakhulu ungavuselela indawo enezingcingo, izihlahla ezigawulwe futhi
Zonke izinto nemisebenzi
Bona wonke amasayithi okugeza
Bona yonke imizila yokuhamba izintaba
Bona wonke ama-pitches nama-camp camp
Bheka wonke amakhaya
Isidlo sakusihlwa esimnandi sokugubha, isidlo sasemini edolobheni noma ubusuku obuhle nabangane. Kukhona okuthile kwakho konke ukuthanda nezikhathi.
ICafé Centrum itholakala emgwaqeni wabahamba ngezinyawo eHultsfred. Kulula ukuthola futhi kunezindawo zokupaka ezinhle eziseduze. Lapha ungathola ikhefu lekhofi noma uthenge ngalo
Akufanele uphuthelwe yiCafé Flotten lapho uvakashela indawo yeNkampani. Ikhefi lenziwa inhlangano engenzi nzuzo futhi linikela emisebenzini yenhlangano. Lapha ungathenga u-ayisikhilimu noma
IMilano iyi-pizzeria ngakho konke ukuthatha kanye nethuba lokudla esizeni. I-pizza, i-kebabs, i-falafel, ama-burger namasaladi ahlukahlukene lapha.
Izimpahla ezisezingeni eliphakeme kuphela ezitholakala lapha. Inyama ikhiqizwa endaweni futhi inakekelwa kahle. Esitolo uzothola izinto eziningi ngenyama. Izimbambo nezibopho, inyama egayiwe
Ingabe ufisa ikhofi noma ulambile? Ingabe ufuna inkomishi yekhofi esanda ukwenziwa? Noma ingabe umane nje udinga ukufaka uphethiloli emotweni? Sikunikeza ukuthengiswa kokudla okusheshayo, amaswidi,
I-pizzeria itholakala maphakathi eVirserum. Lapha udla kahle emagcekeni amnandi. Ku-Restaurang Betjänten uthola njalo insizakalo enhle nekhwalithi enhle. Ungakwazi
ICentralkonditoriet isitolo sokubhaka nokudla lapho ungathola khona ikhofi noma uthenge nawe ikhaya elisanda kubhakwa. Uzothola okunezinhlobonhlobo zamakhekhe wendabuko, amakhekhe, namabhanisi
Akukhathalekile ukuthi ngabe ukubuka kwakho kusethwe ngempelasonto yothando, iholide lomndeni noma ingqungquthela - kunezinhlobo zokuhlala ezifanele zonke izikhathi.
I-Uptäckarda'n 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren ngesikhathi soMkhosi we-Hultsfred Zitholele u-Hultsfred no-Vimmerby ngomhla ka-22 Meyi
I-Uptäckarda'n 2022 Amy Winehouse Kungsfiskaren ngesikhathi soMkhosi we-Hultsfred Zitholele u-Hultsfred no-Vimmerby ngomhla ka-22 Meyi Amadada - amaqhawe ethu egolide!